Fury Unleashed: Linux ပေါ်တွင်ကစားရန်ပျော်စရာကောင်းသောခေတ်သစ်လှုပ်ရှားမှုဂိမ်း Linux မှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောကြမယ် ကြီးမြတ်အရည်အသွေး၏ခေတ်သစ်ဂိမ်းအသစ်နှင့်အဟောင်း၏အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်နှင့်အမည်ရှိသော "ဒေါသထွက်ထွက်"။ ထို့အပြင်၎င်းအတွက်မူလရရှိနိုင်သည် GNU / Linux များ.
"ဒေါသထွက်ထွက်" es တစ် ဦး roguelita အရေးယူပလက်ဖောင်း combo အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခေတ်သစ် roguelite platformers များ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုကျောင်းဟောင်း platformer သေနတ်သမားဂိမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။
ထို့အပြင်ချစ်သောသူတို့အဘို့ စိန်ခေါ်မှုသို့မဟုတ် Old School တွင်အားကစားငါတို့ချက်ချင်းငါတို့ကိုပစ်လိုက်ကြလိမ့်မည် နောက်ဆုံးဆက်စပ် post အခြားဆက်စပ်ရေးသားချက်များနှင့်ဆက်နွယ်မှုများပိုများသောနေရာ -
"Eduke32 ဦး ဖြစ်ပါတယ်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်အခမဲ့အိမ်ဂိမ်းအင်ဂျင်နှင့် Duke Nukem 3D (Duke3D) PC အတွက်ဂန္တ ၀ င်လူပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်ပစ်ဂိမ်းကိုလိုက်လျောညီထွေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD နှင့်အခြားသောသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောပစ္စည်းများ ထို့အပြင်၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် open source ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။" EDuke32: GNU / Linux မှာ Duke Nukem 3D ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ပြီးကစားနည်း။
1 Fury လွှတ်ထုတ်လိုက်ပြီ - Roguelita လှုပ်ရှားမှုပလက်ဖောင်းဂိမ်း
1.1 အဆိုပါ Fury လွှတ်ပေးဂိမ်းကဘာလဲ?
Fury လွှတ်ထုတ်လိုက်ပြီ - Roguelita လှုပ်ရှားမှုပလက်ဖောင်းဂိမ်း
အဆိုပါ Fury လွှတ်ပေးဂိမ်းကဘာလဲ?
အဆိုအရ ဂိမ်း developer များမိမိအခုနှစ်မှာ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"Fury Unleashed ဟာ combo-based လူဆိုးစာရင်းလှုပ်ရှားမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သတ်သမျှတိုင်းဟာသင့်ရဲ့ combo ကိုတိုးပွားစေသည်။ အချို့သောတံခါးခေါက်များနှင့်သင်၏ပျက်စီးခြင်းခုခံမှုနှင့်ကုသမှုစွမ်းအားများစတင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်အပြီးသတ် combo တစ်ခုတည်း၌ပင်သင်နိုင်နိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အလုပ်တက်နေသလား။
ထို့အပြင် Fury Unleashed ကို Dead Cells နှင့် Rogue Legacy ကဲ့သို့သောခေတ်မီ roguelite platformers များ၏လှုံ့ဆော်မှုကို Contra နှင့် Metal Slug တို့ကဲ့သို့အမှတ်တရအမှတ်တရများဖြင့်ပေါင်းစပ်။ ဖန်တီးထားသည်။"
ဒီ၏များစွာသောထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်များအနက် Cross-platform ဂိမ်းဆိတ်ကွယ်ရာကအပေါ်ကိုကစားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ GNU / Linux များအောက်ပါတို့သည်
လှပသောအစဉ်အဆက် - ပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်ပြကဲ့သို့အမြင်အာရုံရှုခင်း: ဘယ်ဟာကမင်ကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခန်းတစ်ခုချင်းစီဟာကာတွန်းပုံနဲ့တူတဲ့သက်ရှိရုပ်ပြတွေရဲ့စာမျက်နှာတွေကိုတင်ဆက်မှုကိုခွင့်ပြုတာလဲ။
gameplay သက်ရောက်မှုကြောင်း Excellent က combo စနစ်: အလွယ်တကူရန်သူတွေကိုအလွယ်တကူသတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အပြင်ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဒေါသအရှိန်ကိုပါဖယ်ထုတ်ပေးပြီးပျက်စီးစေစရာမလိုဘဲသူတို့သွားတဲ့အရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်။
ရိုးရှင်းသောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကစားသမား၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်သည့် Hard mode နှင့်ဂိမ်း၏အခက်အခဲဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုအရသာမှချိန်ညှိနိုင်သည့်လွယ်ကူသောစနစ်တို့အကြားလွယ်ကူစွာရွေးချယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ပျော့ပျောင်းသော permadeath နှင့်အတူ Roguelite စတိုင်။ လက်ဒီဇိုင်းအဆင့်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာမျိုးဆက်အလွှာများရောနှော။ ဖန်တီးထားသောကမ္ဘာများကိုပေးသည်။
ထူးခြားတဲ့အခြေအနေဖြေ - သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့လှပတဲ့ရုပ်ပြစာမျက်နှာအမျိုးအစားဖန်တီးမှုတွေကနေတဆင့်လူတိုင်းကိုရန်သူတွေနဲ့လာပြီးတေးဂီတဝန်းကျင်မှာကစားခွင့်ပေးမှာပါ။
အမျိုးမျိုးသောဂိမ်း Modes သာဖြေ။ ။ ဒေသတွင်းသမဝါယမသင်တန်းတစ်ခုမှာတစ်ယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကစားခွင့်ပေးတယ်။
"Fury Unleashed" သည်အခမဲ့မဟုတ်၊ အခမဲ့လည်းမဟုတ်ပါသို့သော်၎င်းသည်ရရှိနိုင်ပါသည် ဇာတိကစားခဲ့သည် အပေါ် GNU / Linux များ ဒါမှမဟုတ် ရနှေးငှေ့ဒါကြောင့်လူသိများခံထိုက်တယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့ကျသောကိစ္စရပ်အတွက်၎င်း၏အခမဲ့နှင့်သရုပ်ပြနိုင်သောအပိုင်းကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ download ကိုရယူပါလိမ့်မည် installer / executableမှ «gameJolt ရှိအပိုင်းကို download လုပ်ပါ».
ပြီးတော့ကျနော်တို့အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ Linux အိုင်ကွန် (Penguin) အတွက်ချုံ့ဖိုင်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ .zip အမျိုးအစား ရရှိနိုင်
ပြီးတာနဲ့သင်၏ compressed အရင်းအမြစ်ဖိုင် («fury-unleashed-prologue-linux.zip»)၎င်းကို unzip လုပ်ရန်နှင့် console သို့မဟုတ် graphically မှတဆင့်၎င်းကို executable file မှတဆင့် run ရန်သာကျန်ရှိသည်။ «FuryUnleashed.x86_64».
အဆိုပါ အကယ်. GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ် အသုံးပြုမှုသည်ဂိမ်းနှင့်အခြားသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်အတိုင်းပြproblemsနာမရှိဘဲစတင်ပါလိမ့်မည် Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
မသန်စွမ်း ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်အောက်ပါတို့ကိုသင်ရယူနိုင်သည် link ကို သက်ဆိုင်သည် ရနှေးငှေ့။ နေစဉ်, အခြားစူးစမ်းဖို့ Linux အတွက်အလားတူဂိမ်းများ သင်အောက်ပါစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ် link ကို သက်ဆိုင်သည် GameJolt.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Fury Unleashed»သော တစ် ဦး roguelita အရေးယူပလက်ဖောင်း combo နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်နိုင်ပါတယ်အပေါ်အခြေခံပြီး GNU / Linux ပေါ်မှာဇာတိတီးခတ်ခဲ့တယ်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Fury Unleashed: Linux ပေါ်တွင်ကစားရန်ပျော်စရာကောင်းသောခေတ်သစ်လှုပ်ရှားမှုဂိမ်း
Android 12 ၏တတိယ beta version ကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်